AMBODISAINA, TOAMASINA II : Trano 284 tafo kasaina harodana noho ny hosoka | NewsMada
Mitaintaina fatratra ny mponina ao Ampasimpotsy, amin’ny fokontany Ambodisaina, Kaominina Toamasina suburbaine, distrikan’i Toamasina II noho ny mety ho fandroahana azy ireo amin’ny tanànany. Tanàna mirefy 20ha 67A 29Ca, izay ahitana tanàna 284 tafo sy mponina miisa 600 no iharan’izany noho ny resaka hosoka…
Mitaintaina tahaka ny saobakaka am-bodiriana ny vahoaka ao Ampasimpotsy, anatin’ny fokontany Ambodisaina, Kaominina Toamasina Suburbaine, distrikan’i Toamasina II, amin’izao fotoana izao. Raha ny fantatra, tany mirefy 20 ha 67A 29Ca izay ahitana tanàna 284 tafo no tandindomin-doza fa hoesorina eo amin’ny toerany, izay bodoin’olon-tokana noho ny resaka hosoka. Mbola mandeha eny amin’ny fitsarana ny raharaha, saingy iharan’ny fampihorohoroana ny vahoaka any an-toerana fa tsy maintsy esorina, raha ny vaovao avy any Ampasimpotsy. “Hivoaka rahampitso 23 mey izao ny didim-pitsarana mahakasika ity raharaha ity, saingy efa mandeha sahady ny raom-bava amin’ny mponina ny amin’ny tsy maintsy hanalana azy ireo amin’io tanàna io”, hoy Ialina Tinina Joseph, filohan’ny Fikambanam-bahoaka Manitatra tanàna Tamatave II na (FIMATATA). Raha ny fantatra, efa ny 6 septambra 1989 no nangatahin’izy ireo ny tany tamin’ny alalan’i Doka Bernard, saingy izao nisy nisovoka izao.
Efa nanao fangatahana mialoha
Raha ny nolazain’ny filohan’ny Fimatata fa efa ny taona 1980 ny ray aman-drenin’izy ireo Idoka Bernard no nanajary sy nanamaitimolaly teo ary nahazo laharana tany amin’ny Domaine. Nisy indray olona iray hafa antsoina hoe Patrick Poujois Félicien nahazo “titre” tampoka io tany io. Voatery nampiakatra ny raharaha teo anivon’ny Fitsarana ny tarik’i Doka Bernard. Nambarany fa nandresy izy ireo tamin’ny ady voalohany satria miharihary ny fisiana hosoka tamin’ny antontan-taratasin’ity farany. Nahazo fahazoan-dalana avy amin’ny Fitsarana mihitsy izy ireo hijery ny antontan-taratasy nananan’i Patrick Poujois Félicien, ny taona 2000. Vaky am-batolampy ny resaka fa hosoka avokoa ny taratasin’i Patrick Poujois Félicien ary tsy notanterahina araka ny tokony ho izy ny dingana narahina amin’ny fahazoana ny tany, toy ny “reconnaissance”. Tsy nisy koa ny “constation de la mise en valeur”. Tsy misy sonia ny sasany, ary ny misy aza tsy mitovy fa hosoka daholo no nahatongavany, amin’ilay titre io. Nisy anefa ny fikasana hanatanteraka fandatsaham-bato nataon’izy ireo ka voatery nitory azy ireo ny avy amin’ny fokonolona, ny 25 septambra 2000 mitondra ny laharana AFF-18.187 tamin’ny 1 marsa 2000. Manampy io, ny fangatahan’ny mpitory ny amin’ny mba tsy hikasikasihan’ny roa tonta ny tany alohan’ny hivoahan’ny didim-pitsarana.
Olona 600 ahina ho voaroaka
Efa tanàmbe mihitsy no misy io toerana mirefy 20 ha 67A 29Ca io, izay ahitana tanàna 284 tafo, ary olona miisa 600 any ho any. Ahitana fiangonana roa sy toeram-pianarana ao Ampasimpotsy any amin’ny fokontany Ambodisaina Kaominina Toamasina Suburbaine, distrikan’i Toamasina II. Nitohy ny ady teny amin’ny fitsarana ny 8 jona 2016. Nivoaka ny didy ary ny 10 jona 2016, saika horavana ny tanàna. Nampiakatra fitsarana ambony ny avy amin’ny vahoaka. Nijanona ny fandroahana natao tamin’ireo vahoaka, saingy namidin’i Patrick Poujois Félicien indray tamina manamboninahitra retirety ity tany mirefy 20ha 67 A 29 Ca io, izay manao ny fampihorohoroana amin’izao. “Efa nipetraka teo izahay dia mbola namidy tamin’ny olon-kafa indray ity tany ity, izay azo tamin’ny hosoka. Raha ny tokony ho izy, fanaovana tsinontsinona ny ady eny amin’ny Fitsarana ny toa izao”, hoy Ialina Tinina Joseph, filohan’ny FIMATATA. Mbola niakatra fitsarana ambony ny raharaha amin’izao, araka ny didy 147 tamin’ny 8 febroary 2017. Manentana ny mpitondra fanjakana izy ireo, mba hijery akaiky izao raharaha izao. Manaitra ny tomponandraikitra eo anivon’ny Fitsarana koa, mba hanara-maso ity raharaha ity. Hijery ifotony ny hosoka nanomboka ny nahazoan’i Doka Bernard ny tany tamin’ny 1989 ka hatramin’ny nahatongavan’ireo nividy “titre” hosoka ireo. Velon-taraina, araka izany, ny solontenan’ny mponina fa ny olon-tsy nangataka no nahazo fa ny olona nangataka indray no nangaina. Fisaka tokoa ny marina eto amin’ny tany sy ny firenena?